11 Anyị nwere ike ichewe naanị banyere onwe anyị. Iwe were Jona onye amụma mgbe Jehova meere ndị Ninive ebere. (Jona 4:1-3) Gịnị mere iwe ji wee ya? O nwere ike ịbụ n’ihi na o chere na ndị mmadụ ga-ekwu na ya bụ onye amụma ụgha ebe ọ bụ na e bibighị obodo ahụ ọ sị na a ga-ebibi. Ọ dị ka ihe ka Jona mkpa bụ otú ndị mmadụ ga-esi na-ele ya anya, ọ bụghị otú a ga-esi chebe ndị bi na Ninive. Ànyị nwere ike ime ụdị ihe a Jona mere? Ọ bụrụ na anyị na-eche naanị banyere onwe anyị, anyị nwere ike ichefu na anyị kwesịrị inyere ndị mmadụ aka ka ha chegharịa. Dị ka ihe atụ, o nwere ike anyị na-ekwusa ozi ọma kemgbe ọtụtụ afọ, na-agwa ndị mmadụ na ụbọchị Jehova dị nso. Ma, ọ bụrụ na ndị mmadụ na-akparị anyị maka na ụbọchị ahụ abịabeghị, ọ̀ ga-eme ka anyị chewe na Jehova na-egbu oge?—2 Pita 3:3, 4, 9. GỊNỊ KA ANYỊ GA-EME KA ANYỊ GHARA ‘ỊNA-EWESO JEHOVA OKÉ IWE’
12 Gịnị ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị echee na ihe Jehova mere ma ọ bụ ihe o kwere ka o mee ezighị ezi? Anyị kwesịrị icheta na anyị ekwesịghị iche otú ahụ. Ilu 19:3 kwuru, sị: “Mmadụ pụrụ imebi ohere o nwere site na nzuzu ya, ma mesịa taa Jehova ụta.” (Baịbụl Nsọ nke International Bible Society) N’ihi ya, ka anyị tụlee ihe ise ga-enyere anyị aka ka anyị ghara ikwe ka nsogbu ndị bịaara anyị mee ka anyị tawa Jehova ụta. 13 Mee ka gị na Jehova na-adịkwu ná mma. Ọ bụrụ na anyị na Chineke dị ná mma, anyị agaghị ewesa ya iwe. (Gụọ Ilu 3:5, 6.) Anyị kwesịrị ịtụkwasị Jehova obi. Anyị ekwesịghịkwa iche na anyị ma ihe karịa ya ma ọ bụ na-eche naanị banyere onwe anyị. (Ilu 3:7; Ekli. 7:16) Ọ bụrụ na anyị eburu ihe a n’obi, ọ ga-eme ka anyị ghara ịta Jehova ụta mgbe ihe ọjọọ mere. 14, 15. Gịnị ga-enyere anyị aka ka ihe ndị ọzọ kwuru ghara imebi anyị obi?
mailto:?body=‘Ewesola Jehova Oké Iwe’%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013603%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=‘Ewesola Jehova Oké Iwe’